Oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu nke ndị na-emetụta Marketing Landscape | Martech Zone
Fraịde, Machị 25, 2022 Fraịde, Machị 25, 2022 Alexander Frolov
Afọ iri gara aga abụrụla otu nnukwu uto maka ịre ahịa influencer, na-ewepụta ya dị ka atụmatụ a ga-enwerịrị maka ụdị na mbọ ha na-eme iji jikọọ na ndị na-ege ha ntị. Atụkwasara arịrịọ ya ka ọ ga-adịgide ka ọtụtụ ụdị na-achọ ka ha na ndị na-eme ihe na-akpakọrịta iji gosipụta izi ezi ha.
Site na ịrị elu e-azụmahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mweghachi nke mgbasa ozi na-emefu na ahịa mmetụta sitere na telivishọn na mgbasa ozi na-anọghị n'ịntanetị, yana ịba ụba nke ngwanrọ igbochi mgbasa ozi nke na-egbochi mgbasa ozi ịntanetị ọdịnala, ọ bụghị ihe ijuanya:
A na-atụ anya na ahịa ndị na-emetụta mmetụta ga-emepụta ijeri $22.2 n'ụwa niile na 2025, site na ijeri $ 13.8 n'afọ gara aga.
Steeti US nke mmetụta ire ahịa, HypeAuditor
Agbanyeghị, ihe ịma aka na-ebilite n'ime azụmaahịa influencer ka ọdịdị ala ya na-agbanwe mgbe niile, na-eme ka ọ sie ike maka ụdịdị, na ọbụna ndị na-eme ihe n'onwe ha, iji na-agbaso usoro kacha mma. Nke ahụ na-eme ugbu a oge zuru oke iji nọrọ n'ụlọ n'ihe rụrụ arụ, ihe na-emeghị, yana ihe ọdịnihu nke mkpọsa mmetụta dị irè dị ka ọ dị.
Ọdịnihu bụ Nano
Ka anyị na-enyocha onye mere ebili mmiri n'afọ gara aga, nke bụ eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ ndị na-abụghị ndị ahịa na ndị na-ere ahịa. N'afọ a, ụwa enweghị nchegbu na nnukwu aha dị ka The Rock na Selena Gomez - ha kwadoro na micro-influencers na nano-influencers.
Ndị na-eme ihe nkiri a, nke nwere n'etiti ndị na-eso 1,000 na 20,000, nwere ikike iru obodo niche, na-eje ozi dị ka ọwa kachasị mma maka ụdị iji ruo otu mpaghara nke ndị na-ege ha ntị. Ọ bụghị naanị na ha nwere ike jikọọ na otu ndị na-eleghara ahịa ahịa ọdịnala anya, mana ọnụego ntinye aka ha (ER) dị elu. Na 2021, nano-mmetụta nwere nkezi ER nke 4.6%, ihe karịrị okpukpu atọ karịa nke ndị na-eme ihe nwere ihe karịrị 20,000 na-eso ụzọ.
Ike nke micro-influencers na nano-influencers agbanarịghị ndị na-ere ahịa na dị ka ụdị na-achọ ime ka usoro mgbasa ozi ha dị iche iche na-eme ka ha na-eme ka ER dị elu na mgbasa ozi na-aga n'ihu, anyị ga-ahụ ọkwa ndị a na-enwe mmetụta na-enweta ọbụna ewu ewu karị.
Ụlọ ọrụ mgbasa ozi mmetụta na-aga n'ihu na-eto eto
N'ụzọ pụrụ iche, data egosila na nkezi afọ nke ndị na-ahụ maka mgbasa ozi ọha na-agbaba n'afọ gara aga.
Pasent ndị ọrụ na Instagram dị n'agbata afọ 25 na 34 bilitere site na 4%, ebe ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ TikTok dị afọ 13 ruo 17 dara site na 2%.
Ndị ọrụ TikTok nọ n'agbata afọ 18 na 24 mebere ndị ọrụ kachasị ukwuu n'elu ikpo okwu, na 39% nke ndị ọrụ niile.
Ka ọ dị ugbu a, 70% nke ndị ọrụ YouTube nọ n'agbata afọ 18 na 34.
Ike nke ndị na-ege ntị tozuru okè chere eziokwu ndị na-eche echiche pụtara n'ime ndị na-eso ụzọ isiokwu a chọrọ. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ gara n'ihu na-abata na Instagram maka Beyonce na Kardashians, nchọpụta na-egosi na ego & Economics, Health & Medicine, na Business & Careers bụ ngalaba nke dọtara mmasị na ya. ndị na-eso ụzọ ọhụrụ na 2021.
Mmụba nkuchi, ihe ọhụrụ na Metaverse ga-eme ka ahịa ndị na-emetụta mmetụta ruo n'ọkwa ọzọ.
Industrylọ ọrụ mgbasa ozi na-emetụta mmetụta na 2022 bụ ọkaibe karịa ka ọ dịbu tupu oria ojoo, ndị nwere ihe metụtara achọpụtala. Ndị na-emetụta ya ugbu a bụ akụkụ bụ isi nke ọtụtụ akwụkwọ egwuregwu ndị ahịa, ọ bụghịkwa naanị maka ọrụ ndị a na-eme naanị otu ugboro bụ́ ndị na-emekarị afọ ole na ole gara aga. Ụdị na-achọwanye mmekọrịta na ndị na-eme ihe.
Ka ọ dị ugbu a, usoro mgbasa ozi mgbasa ozi na-enye ndị na-emepụta ngwá ọrụ ọhụrụ na ụzọ ndị ọzọ isi nweta ego. Na 2021, Instagram gbakwunyere ụlọ ahịa ndị na-emepụta ihe, usoro nkwekọrịta nkwalite ọhụrụ, yana nkwalite n'ahịa ahịa mmetụta iji nyere ụdịrị aka jikọọ na ndị ọrụ. TikTok weputara ntinye vidiyo na onyinye mebere, yana ike nkwanye ndụ. Na YouTube kpughere $ 100 nde Shorts Fund dị ka ụzọ iji kpalie ndị na-eme ihe ike imepụta ọdịnaya maka azịza ya na TikTok.
N'ikpeazụ, ịzụ ahịa n'ịntanetị enwetala uto meteoric n'oge ọrịa a, mana…
Azụmahịa ọha na-atụ anya na ọ ga-eto okpukpu atọ ngwa ngwa, ruo $1.2 trillion site na 2025
Ihe kpatara eji ahazi ịzụ ahịa maka mgbanwe mmekọrịta ọha, Accenture
Usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ebuli njikọ e-azụmahịa, dịka Ihe nkwụsị nke Instagram na Mmekọrịta TikTok na Shopify, iji mee ka ọ dị mfe ma nweta ego na ikuku ifufe ahụ.
Afọ ole na ole gara aga egosila ndị na-emetụta mgbasa ozi mgbasa ozi dị ka ihe bara uru, na-apụghị izere ezere na-eduga na evolushọn nke na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ nke ọma maka ihe na-abịa. Nke ahụ ihe na-abịa abịa nwere ike ịbụ uto na nkuchi nke eziokwu agbakwunyere na metaverse.
Inweta azụmaahịa influencer site na akụkụ abụọ gaa na atọ ga-abụ nnukwu ohere na-esote, dị ka egosipụtara site na ngbanwe atụmatụ Facebook iji lekwasị anya n'ihe niile Meta. Emehiela ihe, ọ ga-ewetakwa ọtụtụ ihe ịma aka. Ịwulite na ịkekọrịta ahụmịhe imikpu ga-apụta nnukwu usoro mmụta maka ndị na-eme ihe ike. Mana nyere ka ụlọ ọrụ ahụ siri nweta ọrịa na-efe efe na ike dị ukwuu ọ na-aghọ, anyị nwere obi ike na ndị na-eme ihe ga-emeri ihe ịma aka ahụ.
Budata HypeAuditor's US State of Influencer Marketing mkpesa 2022
Tags: Accenturenjikọ aka ọnụegomamaahụmahụ imikpuahịa ahịainfluencer ahịa ụlọ ọrụinfluencer odida obodo ahịainfluencer ahịa ọnụ ọgụgụimpencer ahịa statsinstagraminstagram na-agbadaihe mgbaru ọsọatọmicro-influencernano-mmetụtaSelena Gomezụlọ ahịaazụmahịa azụmahịaelekọta mmadụ mediamgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe yankumeTikTokyoutube
Alexander bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere na HypeAuditor. A matala Alex ọtụtụ ugboro na Ndepụta Ndị Ọrụ Mmepụta Top 50 site na Ikwu Okwu Mmetụta maka ọrụ ya iji melite nghọta n'ime ụlọ ọrụ na-azụ ahịa influencer. Alex na-eduzi ụzọ iji meziwanye nghọta n'ime ụlọ ọrụ ahụ wee mepụta usoro nchọpụta aghụghọ kachasị dabere na AI iji tọọ ọkọlọtọ maka ịme ngosi azụmaahịa influencer, uzo, ma rụọ ọrụ.